Leadership akashinga — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Heunoi MLK noushingi utungamiri vanoonekwa (tisingatauri zvimwe kunyora yakanakisisa Ndakaverenga ndamboverenga). Iye anoramba vachigamuchira mitemo isina kururama uye anoramba kumirira. Iye parura vachimiririra rose rudzi vanhu. Sezvo munhu mutema, Ndiri chaizvo kuna Mwari nokuda basa nokuzadzikiswa kuburikidza naye. Uye sezvo muKristu, Ndinoda kurwira kururamisira sezvinoita zvakaoma sezvaAkaita, tichiyeuka kuti Jesu chete anogona kuunza kururamisira kwakakwana. Uye Achazviita.
Ndiro Mashoko aya atorwa tsamba MLK wakakurumbira. Unofanira kuverenga yose chinhu paunosvika mukana.
"Isu ndakamirira kupfuura 340 makore reConstitutional uye Mwari akapa kodzero dzedu. Marudzi Asia uye Africa vari kutamira pamwe jetlike nokukurumidza vawane rusununguko mune zvematongerwo enyika, asi tichiri vanoverevedza panguva bhiza uye ngoro tifambirane vawane kofi pane zvokudya pakaunda. Zvichida zviri nyore kune avo vasina vakanzwa anopedza miseve yose segregation kutaura, "Mirai." Asi kana waiona noutsinye dzakatsamwa Lynch vanaamai enyu uye madzibaba panguva kuda uye achinyudza nehanzvadzi dzako uye hama chero zvaidiwa; kana wakamboona ruvengo izere mapurisa vanotuka, kukava uye kunyange kuuraya hama nehanzvadzi dzako dema; kana muchiona ruzhinji hama dzako mamiriyoni makumi maviri Negro vachiyemedza mune airtight keji nourombo mukati ane garika vanhu; kana iwe pakarepo amuwane rurimi rwako vakamonyanisa uye matauriro ako vanokakama sezvo muchitsvaka kutsanangurira gore matanhatu wako mwanasikana okuberekwa nei iye haagoni kuenda kuruzhinji kupaki yokuzvivaraidza kuti achangobva kuzoona paterevhizheni, uye ona misodzi yakayangarara mumaziso ake apo iye akaudzwa kuti Funtown rakavharwa vana mavara, uye ona zvinotyisa makore vasingakoshi kutanga kuumba kwake zvishoma mupfungwa denga, uye kumuona kutanga vasataura unhu wake vatanga asingachazivi kuvava kuvanhu chena; kana unofanira concoct mhinduro kwegore mashanu mwanakomana okuberekwa uyo ari kukumbira: "Daddy, nei vanhu chena kubata vanhu chitsvuku saka kureva?"; kana iwe tora muchinjikwa avabvumire nemotokari uye vanoona zvakakodzera kurara usiku pashure usiku ari kusununguka makona motokari yako nokuti praia vachabvuma iwe; paunenge vanyadziswa zuva nezuva nokuda anokakavara zviratidzo kuverenga "chena" uye "mavara"; apo zita renyu yokutanga yava "Nigger,"Zita rako pakati anova" mukomana " (zvisinei kare imi muri) uye zita renyu rokupedzisira anova "John,"Uye mukadzi wako uye amai vari kumbobvira kupiwa kuremekedzwa rokuti" Mai "; kana uri harried masikati uye haunted usiku chokuti uri Negro, kurarama nguva nenguva tiptoe vazhinji, haana kuziva zvikuru chii kutarisira inotevera, uye ukava nemoyo yomukati kutya uye dzokunze resentments; kana uri nokusingaperi vachirwa degenerating pfungwa "nobodiness" Ipapo uchanzwisisa nei isu zvakaoma kumirira. Pane nguva apo mukombe kwokutsungirira unopfachuka, uye varume havachakwanisi achida kuti vakawira mugomba rakadzikadzika netariro. Ndinovimba, varume, unogona kunzwisisa kwedu pamutemo uye sarambidzika chinya. Unoudza zvizhinji mwoyo pamusoro chido chedu kutyora mitemo. Zvechokwadi Iri pamutemo hanya. Sezvo isu saka nokushingaira kukurudzira vanhu kuti kuteerera Supreme Court kuti zvasarudzwa 1954 dzichirambidzawo segregation munzvimbo muzvikoro, Pakutanga zvingaita sokuti pane gangaidzo kwatiri nokungwaririra kutyora mitemo. Mumwe anogona zvakanaka kubvunza: "Unogona sei vanotsigira nokuputsa dzimwe mitemo uye kuteerera vamwe?"Mhinduro yacho iri pakuti pane mhando mbiri mitemo: nevasakarurama. Ini aizova wokutanga dzichitsigira kuteerera chete mitemo. Mumwe ane gakava asi vaine mutoro kuteerera chete mitemo kwete chete. Asiwo, Munhu ane tsika basa kusateerera mitemo vasakarurama. Ini vangabvumirana St. Augustine kuti "ane mutemo kururama hakuna mutemo zvachose."
-Martin Luther King Jr., Tsamba kubva Birmingham Aakapedza Ari Mujeri
BornWithPurpose • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:33 ndiri • pindura
Uyu yakadaro rairatidza aitarire chii rusaruro akatarisa akaita. Zviri kunyange zvakaoma kufunga kuti kusaruramisira kuti zvakadini akanga kunyange makore zana apfuura. MLK Zvaifadza murwi uye ikurudziro Mwari akashandisa. Mumwe wangu kufarira kumusangano mazwi anokodzera nguva dzose…. ” Rima havagoni kudzinga rima, Chiedza chete anogona kuita kuti. Ruvengo havagoni kudzinga ruvengo, Rudo chete anogona kuita izvozvo.”
Sean • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:33 ndiri • pindura
Never kutanga mutsara ine pachiimbwa akaita 'asi', kana 'sezvo'.